အို့တက်ယွန် - ဝီကီပီးဒီးယား
(1988-12-27) ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၁၉၈၈ (အသက် ၃၁)
}} အို့တက်ယွန် (ဟန်းဂု: 옥택연; Hanja: 玉澤演; ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၈၈ မွေး), သည် တက်ယွန်ဟု လူသိများပြီး၊ တောင်ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်၊ တေးရေးသူနှင့် လုပ်ငန်းရှင် တဦး ဖြစ်သည်။ တောင်ကိုရီးယားလူငယ်အဖွဲ့ တူးပီအမ်၏ အဓိက ရက်ပ်ဆိုသူ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ၌ စင်ဒရဲလားညီမ ရုပ်သံဖြင့် ပွဲဦးထွက်လာပြီးနောက်၊ အိပ်မက်မြင့်မြင့်မက်(၂၀၁၁)နှင့် ချကြစို့၊သရဲ(၂၀၁၆)တို့၌ ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂.၁ တူးပီအမ်နှင့် ပွဲဦးထွက်ခြင်း
၅ စစ်မှုထမ်းရန် စာရင်းသွင်းခြင်း
၈ ဆုနှင် ဇကာတင်
ဘူဆန်၌ မွေးသော တက်ယွန်သည်  အသက် ၁၀ နှစ်တွင် မိဘနှစ်ပါး၊ အစ်မ ဂျီဟင်းနှင့်အတူ မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်၊ ဘက်ဖို့မြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ၎င်းမြို့မှာ ပိုကြီးမားသော ဘွန်စတွန်ဒေသရှိ မြို့လေးတမြို့ ဖြစ်သည်။ ဘက်ဖို့အထက်တန်းကျောင်း၌ တက်ရင်း ခုနစ်နှစ်ကြာခဲ့သည်။ ကိုရီးယား၌ အနုပညာလုပ်ငန်းများ မစတင်မီ၊ ကျောင်း၌ သူသည် စစ်တုရင်အသင်း၊ ဂျက်ဂီတအဖွဲ့၊ ဂျေဗွီ ဘောသင်းနှင့် အမျိုးသားဂုဏ်မြင့်အသင်းတို့၌ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆိုးလ်၊ ယောင်ဒုန်းအထက်တန်းကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့တက်ရောက်ပြီးနောက် ဒန်းကုတက္ကသိုလ်၌ စီးပွားစီမံမေဂျာကို လေ့လာသည်။ လက်ရှိ၌ နိုင်ငံတကာရေးရာဘွဲ့ရအတန်းကိုရီးယားတက္ကသိုလ်၌ သင်ယူလျက်ရှိသည်။ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန်နှင့် ကိုရီးယားလို ကျွမ်းကျင်သည်။  ဘူဆန်ဇာတိ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ၊  တက်ယွန်သည် ဘူဆန်ဒေသိယစကား သရသံခြောက်လုံးအသုံးပြုသော ဆတိုးရိလေသံကို ရင်းနှီးရလေကား အံ့ဖွယ်နေ့ရက်များ ဇာတ်လမ်းတွဲ၌ အသုံးချထားသည်။
ဂျေဝိုင်ပီအင်တာတိန်းမင့်၏ လူရွေးပွဲကို ဝင်ပြိုင်ရန် သူ့ကို မရမက တိုက်တွန်းခဲ့သူမှာ သူ့အစ်မ ဂျီဟင် ဖြစ်ပြီး၊ အင်တာနက်အသုံးပြုနေစဉ် လူရွေးပွဲကြော်ငြာကို တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စိတ်လက်မပါ သဘောတူလိုက်ရပြီးနောက်၊ တက်ယွန်၏ ၁၇ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့၌ နယူးယော့မြို့တော်သို့ နှစ်ဦးသား ချီတက်သည်။ တပတ်ခန့်အကြာ ဇကာတင် ၃၅ ယောက်တွင် အရွေးခံရပြီး၊ ဆက်ပြိုင်ရန် ကိုရီးယားသို့ ဆင့်ခေါ်ခံရသည်။ အစတွင် မော်ဒယ်လုပ်ရန် တက်ယွန်က လျှောက်ထားခဲ့သော်လည်း၊ ဒိုင်များက အဆိုအကဘက်ကို စမ်းကြည့်ရန် အကြံပြုခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး (သူနှင့် တဖွဲ့တည်းသားချင်း ဖြစ်လာမည့် လီဂျွန်ဟိုနှင့် ဟွန်ချန်ဆန်းလည်း ပါသော)ဇကာတင် တဒါဇင်စာရင်း၌ ပါခဲ့ပြီး၊ စူပါစတားရှင်သန်ရေးရှိုးပွဲ ဝင်ပြိုင်ကြရာ၊ ဦးစွာ ထွက်ခဲ့ရသူမှာ တက်ယွန် ဖြစ်သည်။
တက်ယွန်သည် တူးပီအမ်အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ပြီး၊ "10 Points out of 10 Points" ("10점 만점에 10점") ပထမဆုံး ဆင်ဂယ်သီချင်းဖြင့် ပွဲဦးထွက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ၌ ကင်ဆိုဟွန်နှင့်အတူ ချကြစို့၊သရဲဇာတ်လမ်းတွဲ၌ ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊  လိုတီဂျူတီဖရီးက ထုတ်လုပ်သော ပထမအနမ်းခုနစ်ခါ၌ ပူးတွဲ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ၌ ပျောက်ဆုံးသွားသောအိမ်ကြီး သဲဖိုဇာတ်လမ်း၌ သရုပ်ဆောင်သည်။ (သရုပ်ဆောင်ထားသော ဇာတ်ကားစာရင်းကို ဇယား၌ အသေးစိတ် ဖော်ပြထားသည်) 
ခေါင်းကြီးပြီး၊ ကိုယ်ရှည်သော ကြောင်များကို ဆွဲပြီး၊ လက်မှတ်ထိုးပေးသောကြောင့်လည်း လူသိများသည်။ သူနှင့် သူ့ပရိသတ်များက ထိုကြောင်ကို အို့ကက်Okcats (옥캣)ဟု ညွန်းကြသည်။ ထိုင်းကဲ့သို့ နိုင်ငံများ၌ ထုတ်သော အို့ကက်ရှပ်များ ပေါက်သွားသည်ကို ကြည့်ပြီး၊ သူ့ကိုယ်ပိုင် အို့ကက်များ ထုတ်လုပ်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း တွစ်တာမှတဆင့် ထုတ်ဖော်လိုက်သည်။
၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃ ၌ မိနစ်သုံးဆယ်ကြာသော အို့ကက်တံဆိပ်ကို မိတ်ဆက်ပွဲလုပ်သည်။ တင်ဆက်မှုကို အို့ကက်လိုက်ဟု စာတန်းထိုးပြီး၊  သတင်းထောက် ၅၀ ကျော် တက်သည်။  တင်ဆက်မှုတွင် အို့ကက်ကြောင် သူလက်မှတ်ထိုးသည့်တလျှောက်မှ ယနေ့ထိ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာပုံ အရုပ်များနှင့် ဗီဒီယိုများ ပြသပြီး၊ နှိုးစက်တီးလုံးသံပါ ထုတ်ဖော်ပြသကာ အို့ကက်တံဆိပ်ပါ ခေါင်းအုံး၊ အရုပ်များ၊ ယူအက်ဘီစတစ်များနှင့် ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မည့်အကြောင်း ရောင်းချရန် ပြောဆိုသည်။ အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ်လုပ်သူများမှ တဆင့် ရောင်းချသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သူ့၏ တွစ်တာနှင့် ဖေ့ဘွတ် တရားဝင် အကောင့်များမှနေ၍ ကြေငြာပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
တက်ယွန်၏ အို့ကက် လုပ်ငန်းမှ ဆယ်လအတွင် ဒေါ်လာတသန်း ရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းများက တင်ပြကြသည်။ သူကလည်း ၂၀၁၄ နှစ်ကုန်အထိ ထုတ်ကုန် ၃၂ မျိုးမှ အမျိုး ၇၀ အထိ ထုတ်ပြီး လုပ်ငန်းတိုးချဲ့သွားမည်ဟု ဆိုသည်။ 
၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ ၌ ဂျေဝိုင်ပီကိုယ်စားလှယ်က "တက်ယွန်သည် အမေရိကန် ပီအာဗီဇာကို စွန့်လွှတ်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့က အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် ပယ်ဖျက်စာ တရားဝင် ရရှိခဲ့ကြောင်း" ဖော်ပြသည်။ 
၂၀၀၈ ခုနှစ်၌ အဆစ်လွဲနေသော ပုခုံး၊ ကျောနှင့် အမြင်အာရုံချို့ယွင်းမှုတို့ကြောင့်၊ စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ တိမ်းရှောင်နိုင်ရန် ကိုယ်ကာယစစ်ဆေးမှု ခံယူခဲ့သော်လည်း၊ အများပြည်သူ ဝန်ဆောင်မှုအတွက်သာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သော ကိုယ်ကာယအခြေအနေရှိကြောင်း ပြန်ကြားချက်ရရှိသည်။  ၂၀၁၂ နှင့် ၂၀၁၃ တွင် မျက်လုံးထဲရှိ အမြင်အာရုံကို ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ၂၀၁၃ က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကျိုးသွားခဲ့သော လက်မောင်းအတွင်း ပင်အပ်များကို ဖယ်ရှားခြင်းတို့အတွက် ခွဲစိတ်မှု ခံယူသည်။  ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာ၌ စစ်မှုထမ်းရန် အကုန်ရှင်းလင်းသွားသော်လည်း တက်ယွန်သည် အလုပ်ဝန်ပိနေရာ စာရင်းပေးရန် နှောင့်နှေးနေခဲ့သည်။
၂၀၁၆ စက်တင်ဘာလလယ်၌ အို့တက်ယွန်သည် ၂၀၁၇ အစောပိုင်း၌ စစ်မှုထမ်းဆောင်တော့မည်ဟု ကြေငြာသည်။
2016 Touching You Naver TV Cast (South Korea)
Hey Ghost, Let's Fight tvN Park Bong-pal
First Seven Kisses Naver TV Cast Ok Taec-yeon Ep. 5-6
2006 Superstar Survival SBS TBA TBA TBA
2008 Hot Blood Mnet 10 အောက်တိုဘာ ၁၀, ၂၀၀၈ (အောက်တိုဘာ ၁၀, ၂၀၀၈) နိုဝင်ဘာ ၈, ၂၀၀၈ (နိုဝင်ဘာ ၈, ၂၀၀၈)
Idol Army (Season 3) MBC 17 ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၈ (၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၈) ၂၆ မတ် ၂၀၀၉ (၂၆ မတ် ၂၀၀၉)
2009 Wild Bunny Mnet7ဇူလိုင် ၂၁, ၂၀၀၉ (ဇူလိုင် ၂၁, ၂၀၀၉) ဩဂုတ် ၂၁, ၂၀၀၉ (ဩဂုတ် ၂၁, ၂၀၀၉)
2011 2PM Show! SBS 12 ဇူလိုင် ၉, ၂၀၁၁ (ဇူလိုင် ၉, ၂၀၁၁) စက်တင်ဘာ ၂၄, ၂၀၁၁ (စက်တင်ဘာ ၂၄, ၂၀၁၁)
2013 A Song For You From 2PM KBS2 15 ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇, ၂၀၁၃ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇, ၂၀၁၃) မေ ၂၄, ၂၀၁၃ (မေ ၂၄, ၂၀၁၃)
We Got Married (Global Edition) Mnet 1 - 20 ဧပြီ ၇, ၂၀၁၃ (ဧပြီ ၇, ၂၀၁၃) ဇူလိုင် ၁၄, ၂၀၁၃ (ဇူလိုင် ၁၄, ၂၀၁၃)
2015 Oven Radio 1theK5ဇွန် ၁၄, ၂၀၁၅ (ဇွန် ၁၄, ၂၀၁၅) ဇွန် ၁၈, ၂၀၁၅ (ဇွန် ၁၈, ၂၀၁၅)
2009 Inkigayo SBS MC with Jang Wooyoung and Ha Yeon-joo
2010 Inkigayo SBS MC with Jang Wooyoung and Sulli
Family Outing2SBS fixed cast
2013 Human Condition (Living Without Stress) KBS2 guest episode 44-47
2014 Three MealsaDay tvN fixed cast with Lee Seo-jin
2015 Three MealsaDay Season2tvN fixed cast with Lee Seo-jin and Kim Kwang-kyu
Taecyeon Special ～Winter Hitori～
Fight Rock ver.
Toc Toc Toc (Korean)
Move Your Body (Korean)
Slender Man Taecyeon ver.
ないで Taecyeon ver.
TEASER Taecyeon ver.
君だけじゃない (Limited version B only)
I LOVE U, U LOVE ME Rock ver. (Limited version B only)
Promise (I'll be) Taecyeon ver. (Limited version B only) (Korean)
2009 Baek Ji Young ft. Taecyeon "My Ear's Candy" EGO
2009 Bada ft. Taecyeon "Yes I'm In Love" See the Sea
2012 Park Jin-young, Miss A's Suzy, 2PM's Wooyoung and Taecyeon "Classic" Digital Single (Reebok Classic CF)
Junho (2PM), Park Jinyoung (GOT7), JB (GOT7) & Taecyeon "Bounce" JYP NATION KOREA 2014 'ONE MIC
2010 KBS Drama Awards Best New Actor Cinderella's Sister ဇကာတင်
Popularity Award Taecyeon ဇကာတင်
2011 47th Baeksang Arts Awards Best New Actor (TV) Taecyeon ဇကာတင်
Most Popular Actor (TV) Taecyeon ဇကာတင်
Mnet 20's Choice Awards Best Sixpack N/A ဇကာတင်
3rd Bugs Music Awards OST of the Year with Nichkhun & Park Jin-young "My Valentine" ဆုရရှိ
KBS Drama Awards Best Couple with Suzy Dream High ဇကာတင်
2014 50th Baeksang Arts Awards Most Popular Actor (Film) Marriage Blue ဇကာတင်
Most Popular Actor (TV) Wonderful Days ဇကာတင်
3rd APAN Star Awards Excellence Award, Actor inaSerial Drama ဇကာတင်
KBS Drama Awards ဇကာတင်
2016 KWEB FEST Best Actor Touching You ဇကာတင်
↑ :: 2PM ::။ 2016-05-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2PM 택연, '옥캣' 캐릭터 사업 스타트 CEO변신 : 스포츠조선။ 2016-05-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Taecyeon Fell In Love With Night Before Wedding Role : KMovie။ KDramaStars။ 2016-05-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ happy together 2pm 7။ YouTube။ 2016-05-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Cover story: 2PM. iamkoream.com.
↑ February 26, 2013 (2013-02-26)။ Taecyeon Is Accepted into Prestigious Korea University as Grad Student။ Soompi။ 2016-05-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ (Video) 2PM′s Taecyeon Understands.
↑ Agency mates Taecyeon and Park Joo Hyung head to Busan to practice their dialect for 'Very Good Days' (2014-02-01)။ 2016-05-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ BHS junior competes in Korean 'Survivor' – Bedford, MA – Bedford Minuteman.
↑ Archived copy။ July 22, 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ July 30, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ New series ‘Let’s Fight Ghost’ starts in July-INSIDE Korea JoongAng Daily
↑ Lotte Duty Free to releaseaweb drama-INSIDE Korea JoongAng Daily
↑ Kim Yun-jin, Ok Taec-yeon to star in mystery thriller
↑ Watch 2PM Taecyeon's 'The Okcat Live'! (2013-10-11)။ 2016-05-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 131011 THE OKCAT LIVE - 玉澤演(옥캣)။ YouTube (2013-10-11)။ 2016-05-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2PM 옥택연 캐릭터 '옥캣', 1년도 안돼 매출이 무려.. : 네이버 뉴스 (in ko) (2014-07-17)။ 2016-05-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kim၊ Ji-yeon (2010-12-09)။ 2PM 택연 美영주권 포기, 입대준비 (in korean)။ Money Today/Starnews Korea။ 2014-11-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ [단독]2PM 택연, 공익 근무 대신에 현역 판정 "기쁘다" :: 네이버 TV연예 (in ko)။ 2016-05-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ok Taec-yeon Cleared for Active Duty on Second Attempt - The Chosun Ilbo (English Edition): Daily News from Korea - Entertainment > Entertainment
↑ 2017 Oricon Chart - January Week 3။ Oricon။ January 25, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အို့တက်ယွန်&oldid=414253" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ ၁၅:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။